Akụkọ - Ọrụ njirimara nke karama egwuregwu
Njirimara arụmọrụ nke kalama egwuregwu
Egwuregwu mmiri na-ewu ewu aghọwo ngwaahịa egwuregwu ọhụrụ na-ewu ewu na gburugburu ebe obibi. Site na ịrị elu, mmepe na uto na-aga n'ihu nke egwuregwu egwuregwu n'èzí, ahịa nke karama mmiri egwuregwu na China na-agbasa kwa afọ.
1.Ọ dịghị leakage Ọ dịghị omission
Echela na nke a bụ egwuregwu. N’ezie, okwu a nwere ihe abụọ ọ pụtara: n’otu aka, ọ siri ike na n’aka nke ọzọ nchekwa. Ebe obibi ohia di egwu, ma obu ihe isi ike isi ike izere. Ọ bụrụ na ketulu ahụ esighi ike, enwere ike ichepụta nsonaazụ ya. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na emechighi ya ụzọ nke ọma, ọ bụghị naanị na ọ ga-efunahụ mmiri ọ drinkingụ valuableụ bara uru n'ime ọhịa, kamakwa ọ nwere ike dee uwe, akụrụngwa na ihe ndị ọzọ o bu. Ọ bụrụ na e gbuo ihe ndị dị mkpa dịka nri na uwe, enwere ike gbuo gị na oke oke gburugburu.
2.Mfe ibu Portability.
Enwere ọtụtụ ọnọdụ ebe a na-eji karama mmiri eme ihe n'èzí, mgbe ụfọdụ na ịnyịnya ígwè na mgbe ụfọdụ na mgbidi nkume. Nke a na-ebute ihe ndị achọrọ maka ebu mmiri mmiri. Containersfọdụ arịa ndị e ji ihe ndị dị nro mee, dị ka akpa mmiri na mmiri akpụkpọ anụ, nwere uru nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Enwere ike ịgbanwe olu ha na ọdịdị ha ka ọ dị mkpa. O doro anya na nke a bụ ozioma nke akpa gị juru ebe niile.
3. Ezubere maka iche pụrụ iche Ezubere maka ojiji pụrụ iche
Gburugburu dị n’èzí na-adịgasị iche iche, nwekwaa ọtụtụ ụdị egwuregwu ndị dị n’èzí. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọrụ izugbe enweghị ike igbo mkpa. N'ọnọdụ ndị ahụ ebe naanị otu aka ga-eji forụọ, ọnụ kalama nke enwere ike imeghe ma jiri aka ya ma ọ bụ jiri ezé mechie dị ezigbo mkpa. Mgbe enwere ọtụtụ mmadụ na mkpa maka ịma ụlọikwuu na pikinik, karama nwere ike ịpịpị Bọket ahụ ga-egbo mkpa nke ogige ahụ maka mmiri. N’ọnọdụ ndị siri ike dịka ugwu dị elu ma ọ bụ mpaghara ugwu, okpu a gwara mmanụ nke ga - eme ka mmiri gị ghara ifriizi agaghị enye gị nsogbu.
Post oge: Jan-20-2021
, © Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara.